Roma oo diyaar u ah ina £44.5m Oo bound ku iibiyaan xidooga ugu muhiisan
Monday December 03, 2018 - 22:29:30 in Wararka by Mogadishu Times
Kooxda As Roma Ayaa Aqbali Doonta hadii ay kooxaha doonaya ciyaariyahankeeda reer Turki ee Under ay bixiyaan £44.5m oo bound ina ka iibiyaan bisha janaayo. Wiilkaan ayaa wacdaro fiican ka sameenaya xilli ciyaareedka horyaalka talyaaniga ee S
Kooxda As Roma Ayaa Aqbali Doonta hadii ay kooxaha doonaya ciyaariyahankeeda reer Turki ee Under ay bixiyaan £44.5m oo bound ina ka iibiyaan bisha janaayo. Wiilkaan ayaa wacdaro fiican ka sameenaya xilli ciyaareedka horyaalka talyaaniga ee Seri A Isagoo waqtigiisii ugu wacnaa haatan ku guda jira.
Roma ayaa xalay waxa la ciyaarta kulan ka tirsan Seri A Kooxda Inter ciyaar ku soo idlaatay 2-2 Under waxa uu dhaliye midka ka mid goolasha Roma aya dhalisay habeenkii xalay.
21-sano jirkaan ayaa heersare noqday sanadaan isagoo soo jiitay indhaha kooxo badan oo hoyaalada Yurub ka ciyaara.
Sida uu ku waramaayo wariyaha ka howl galaGazzetta dello SportNicolo Schiraayaa aamin in agaasima kooxda RomaMonchiUu aqbali doono dalabyada ka imaanaya kooxaha Egland gaar ahaan Arsenal ee quseeya Under.
Tartan adag ayaa dhex mari doona kooxaha reer Egland kasoo ku aadan Under kooxaha doonaya waxaa ka mid ah Arsenal, Manchester United, Chelsea Iyo Liverpool.